श्रीमानकाे प्रेमिकाको घरमा आगो लगाउँदा प्रेमिका र उनको छोराको मृत्यु | Makalukhabar.com
श्रीमानकाे प्रेमिकाको घरमा आगो लगाउँदा प्रेमिका र उनको छोराको मृत्यु
कार्तिक २२, भारत । राजस्थानको भरतपुरस्थित पौश कोलोनी सूर्या सिटीमा बिहीबार साँझ एक महिला डाक्टरले डाक्टर पतिकी प्रेमिकाको घरमा आगो लगाएर बाहिरबाट ढोका बन्द गरिदिएकी छिन् । घटनामा युवती र उनको ६ वर्षको छोराको मृत्यु भएको छ । उनीहरुलाई बचाउने प्रयास गरेका युवतीका भाइ पनि घाइते भएका छन् ।
ती युवती डाक्टर दम्पत्तिको क्लिनिकमा काम गर्थिन् । पतिसँग ती युवतीको अफेयरको खबर सुनेपछि महिला डाक्टरले युवतीलाई कामबाट निकालिदिएकी थिइन् । यसका बावजुद पनि डाक्टर र ती युवतीबीच भेटघाट जारी रहेको थियो । डाक्टरले ती युवतीलाई घर पनि किनेर दिएका थिए ।
डा. सुदीपको शहरमा श्रीराम अस्पताल रहेको छ । दीपा गुर्जर करिब दुई वर्षअघि श्रीराम अस्पतालमा नै स्वागत कक्षमा काम गर्थिन् । यस दौरान उनको डा. सुदीपसँग परिचय भएको थियो । त्यसपछि दुवैबीच सम्बन्ध झाँगिएको थियो । दुईबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि डा. सीमाले दीपालाई कामबाट निकालिएकी थिइन् । एजेन्सी
बुर्किनाफासोमा विद्युतीय धरापमा परेर ३७ को मृत्यु